တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ကုန်စုံဆိုင်များမှ သက်တမ်းလွန်ကုန်ပစ္စည်း ၄၂ မျိုးကို သိမ်းဆည်းရမိ | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ကုန်စုံဆိုင်များမှ သက်တမ်းလွန်ကုန်ပစ္စည်း ၄၂ မျိုးကို သိမ်းဆည်းရမိ
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက်များမှ ကုန်စုံဆိုင်များအား စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနက လိုက်လံစစ်ဆေးနေရာ နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့အထိ ကုန်စုံဆိုင်(၇)ဆိုင်မှ စားသုံးရန်မသင့် သက်တမ်းလွန် ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအမည်ပေါင်း (၄၂) မျိုးကို သိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်း သိရသည်။
“တောင်ကြီးမြို့နယ် အတွင်း ရပ်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာရောင်းချနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေပါ။ အချိုရည်တွေ၊ နို့ဆီ တခြားသက်တမ်းလွန်ကုန်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်တွေကိုလည်း သက်တမ်းလွန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထပ်မရောင်းချဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ ဒီလအတွင်း တတိယပတ်အထိ ဆိုင်ခန်း (၇) ခန်းလောက် စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတွေ့ရှိရတဲ့ ကုန်စည်တွေပါ။ အမျိုးအမည်ပေါင်းလည်း အစုံပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ မီးဖိုချောင်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေ နို့ဆီအပါအ၀င် ကြက်သားဘူးတွေလည်း အများကြီး ပါပါတယ်။ ကုန်စည်တွေထဲမှာ အစားအသောက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်စွဲတွေကို သေချာကြည့်ပြီးမှ ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်” ဟု ရှမ်းပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းအောင်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ကုန်စုံဆိုင်များအား စစ်ဆေးရာတွင် စားသုံးရန်မသင့်နှင့် သက်တမ်းလွန်များအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ပစ္စည်းသိမ်းယူဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် နောက်နောင် စားသုံးရန်မသင့်ကုန်ပစ္စည်းများ ထပ်မံရောင်းချခြင်းမပြုရန် သတိပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
“ဆေးဝါးတွေရော တိုင်းရင်းဆေးတွေရော ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ တချို့ဆိုင်တွေမှာဆို လက်ကားဆိုင်ကနေ ၀ယ်ယူကတည်းက သက်တမ်းကုန်လွန်နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ပါနေတာတွေ့ရတယ်။ ဒါတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားဖို့လည်း သတိပေးထားတယ်။ ရောင်းတဲ့သူကတော့ သူကရောင်းနေမှာပဲ။ စားသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သက်တမ်းကိုတော့ စစ်ဆေးပြီးမှ ၀ယ်ယူသင့်ပါတယ်” ဟု ရှမ်းပြည်နယ် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းအောင်က ပြောသည်။
စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိစေရန် အသိပေးကြေညာချက် များကို Food and Drug Administration Myanmar Website တွင် ထုတ်ပြန်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
Photo. စားသုံးသူ​ရေးရာ ​တောင်​ကြီး
ရှမျးပွညျနယျ (တောငျပိုငျး) တောငျကွီးမွို့နယျအတှငျး ရပျကှကျမြားမှ ကုနျစုံဆိုငျမြားအား စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနက လိုကျလံစဈဆေးနရော နိုဝငျဘာလ (၁၉)ရကျနအေ့ထိ ကုနျစုံဆိုငျ(၇)ဆိုငျမှ စားသုံးရနျမသငျ့ သကျတမျးလှနျ ကုနျပစ်စညျး အမြိုးအမညျပေါငျး (၄၂) မြိုးကို သိမျးဆညျးရမိထားကွောငျး သိရသညျ။
“တောငျကွီးမွို့နယျ အတှငျး ရပျကှကျတှမှောရှိတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျတှမှောရောငျးခနြတေဲ့ ကုနျပစ်စညျးတှပေါ။ အခြိုရညျတှေ၊ နို့ဆီ တခွားသကျတမျးလှနျကုနျပစ်စညျးတှေ အမြားကွီးတှရေ့ပါတယျ။ ဆိုငျရှငျတှကေိုလညျး သကျတမျးလှနျကုနျပစ်စညျးတှကေို ထပျမရောငျးခဖြို့ သတိပေးထားပါတယျ။ ဒီလအတှငျး တတိယပတျအထိ ဆိုငျခနျး (၇) ခနျးလောကျ စဈဆေးတဲ့အခါမှာတှရှေိ့ရတဲ့ ကုနျစညျတှပေါ။ အမြိုးအမညျပေါငျးလညျး အစုံပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့ မီးဖိုခြောငျသုံးတဲ့ပစ်စညျးတှေ နို့ဆီအပါအဝငျ ကွကျသားဘူးတှလေညျး အမြားကွီး ပါပါတယျ။ ကုနျစညျတှထေဲမှာ အစားအသောကျတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ကတော့ သတျမှတျထားတဲ့ ရကျစှဲတှကေို သခြောကွညျ့ပွီးမှ ဝယျယူသငျ့ပါတယျ” ဟု ရှမျးပွညျနယျ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး ဦးမငျးအောငျက တာခြီလိတျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောသညျ။
တောငျကွီးမွို့နယျအတှငျး ကုနျစုံဆိုငျမြားအား စဈဆေးရာတှငျ စားသုံးရနျမသငျ့နှငျ့ သကျတမျးလှနျမြားအား စဈဆေးတှရှေိ့ပါက ပစ်စညျးသိမျးယူဖကျြဆီးခွငျးနှငျ့ နောကျနောငျ စားသုံးရနျမသငျ့ကုနျပစ်စညျးမြား ထပျမံရောငျးခခြွငျးမပွုရနျ သတိပေးခွငျးမြားကို ဆောငျရှကျနကွေောငျး သိရသညျ။
“ဆေးဝါးတှရေော တိုငျးရငျးဆေးတှရေော ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။ တခြို့ဆိုငျတှမှောဆို လကျကားဆိုငျကနေ ဝယျယူကတညျးက သကျတမျးကုနျလှနျနတေဲ့ ကုနျပစ်စညျးတှေ ပါနတောတှရေ့တယျ။ ဒါတှကေို သူတို့ကိုယျတိုငျ အမွနျဆုံးဖယျရှားဖို့လညျး သတိပေးထားတယျ။ ရောငျးတဲ့သူကတော့ သူကရောငျးနမှောပဲ။ စားသုံးနတေဲ့သူတှအေတှကျတော့ သကျတမျးကိုတော့ စဈဆေးပွီးမှ ဝယျယူသငျ့ပါတယျ” ဟု ရှမျးပွညျနယျ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး ဦးမငျးအောငျက ပွောသညျ။
စားသုံးရနျမသငျ့သော အစားအသောကျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အမြားပွညျသူသိရှိစရေနျ အသိပေးကွညောခကျြ မြားကို Food and Drug Administration Myanmar Website တှငျ ထုတျပွနျပေးနကွေောငျး သိရသညျ။
Photo. စားသုံးသူ​ရေးရာ ​တောငျ​ကွီး